Malunga nathi -Huizhou Olink Technology Co., Ltd.
Malunga ne-Olink Technology Co, Ltd.
Ukusukela ngo-2001, u-Olink unomdla ekwenzeni izixhobo zokubopha amasiko, ii-cable zebandla, intambo ye-USB, izixhumi zomsindo weemoto, isokethi, isibiyeli kunye neetheminali. Ngeli xesha, sikwabonelela nge-OEM, inkonzo ye-ODM kuyilo lweemveliso / kwinqanaba le-APQP kwiimfuno zabathengi.
Umngcelele wethu ongaphakathi endlwini kubandakanya ukubumba kunye nokusetyenziswa kwezixhobo, ucingo kunye nentambo ye-extrusion, isixhobo sokudibanisa kunye nesokethi, isitampu sokuchaneka kwesinyithi, ukubopha ngocingo kunye nendibano yekhebula. Sibonelela ngoluhlu olupheleleyo lwezihlanganisi zeemoto kunye nesokethi zazo zonke iintlobo zokuthengisa iimoto.
Iimveliso zeOlink zisetyenziswa kakhulu kwizixhobo ze-elektroniki zezithuthi ezinje ngenkqubo yokhuseleko, inkqubo ye-AV, inkqubo yemultimedia njlnjl. elektroniki kunye nezibane ze-LED. Izixhobo ezisetyenzisiweyo yi-ROSH / Reach / CA65 ehambelana kunye ne-UL / CUL, VDE, CCC imvume. Ucingo oluzenzekelayo kunye neentambo zihambelana nemigangatho ye-SAE / JASO / DIN. Siza kufumana i-IATF16949 yamva nje ngoMeyi 2018.
Sithumela kumazwe aseYurophu, eMid-mpuma, eMelika, e-Australia naseJapan. Abathengi bethu abaziwayo baquka i-3M, i-Yamaha, iHoneywell, iValeo, iVDO kunye neVisteon.
Umzi mveliso wethu ubeka kwisiXeko saseHuizhou, kwiPhondo laseGuangdong, ukuqhuba iyure enye ukuya eShenzhen. Ngendawo yokusebenzela eyi-17,000 yezikwere zeemitha, sinabalingane abamalunga ne-700.
Sebenzisa inkqubo ye-ERP kunye neCRM, sihlala sibambelela kwisidima SOKUQINISEKA NGAMAQABANE, YENZA IXABISO ELONGEZIWEYO LOMthengi
Sizinikezele ekubeni ngumthengisi oqeqeshiweyo we-ODM weentambo zokubopha kunye nentambo yekhebula, sidlulisile isatifikethi se-IATF 16949: inkqubo esemgangathweni ye-2016 kunye ne-ISO14001: Inkqubo yokusingqongileyo ka-2015, kunye nesatifikethi senkqubo yezonyango i-ISO13485.
Iimveliso zethu ziyahambelana neRoHS, REACH kunye non-phthalate standard yokhuseleko lokusingqongileyo, zonke izinto ezenziwayo zivunyiwe yi-UL.
QC / Inkxaso yobuGcisa
Abasebenzi besebe lethu lemveliso banamava ngaphezulu kweminyaka emi-5 kwimveliso yeentambo zokubopha. I-QC inabasebenzi abangama-18 bebonke. Emva kokhetho olungqongqo, ukuhlolwa kwentambo yokubopha kuneminyaka engaphezu kwe-8 yamava. Isebe lethu lobunjineli lifumene izatifikethi ezininzi zobuchwephesha kunye namava eminyaka eli-15 yophando kunye nophuhliso lweentambo zokubopha ucingo.
Sinikezela ngenkonzo ye-7 * 24H ukubonelela ngekoteyishini yabathengi ngaphakathi kosuku olunye, ukubonelela ngeesampuli ngaphakathi kweentsuku ezi-3, uku-odolwa kungahanjiswa kwiintsuku ezisi-7 kwakamsinya, amandla emveliso yemihla ngemihla angaya kuthi ga kwi-500, iiPC ezingama-000.
Iimveliso zethu ziyakonwabela ukuthengisa eMelika, iYurophu, iOstreliya, iCanada neAisa.
Sinyanisekile ukwamkela undwendwelo lwakho, Huizhou Olink Technology Co., Ltd. uya kuba liqabane lakho elithembekileyo!